Ababoneleli bamadoda kunye neFektri-China Amadoda abavelisi
Ezi glavu zenziwe ngombala we-suede ongaphandle kunye nolungelelwaniso lwesikhumba segusha. I-suede yokwenyani yangaphandle eyenziwe ngeepaneli zokwenyani zeegusha, ulusu oluhle lweegusha lubonelela ngemfudumalo kunye nentuthuzelo, yomelele kwaye ukanti iifayibha zendalo zenza iigloves zinokuphefumla ziyilwe ngesandla zithungelwe zisebenzisa indlela yesiko. zakudala zagawulwa ngeenkcukacha zamanqaku ngasemva, ngakumbi, ziyilelwe isikhumba somnwe sokuthinta kwi-forefinger kunye ne-midfinger, Ungayonwabela i-smartphone yakho kwimozulu ebandayo ngenkululeko ● Inqaku akukho: MG-006 ● W ...
Isandla iiglavu ezolukiweyo zezandla zamadoda aneelastics
Yenziwe nge-100% yesikhumba semvu yokwenyani, ithambile kakhulu. Uboya begusha bendalo buthambile kwaye buyakhanya, bushushu ngokumangalisayo kwaye bomelele ngokugqwesileyo. zomelele kwaye ukanti iintsinga zendalo zenza iigloves ziphefumleke.Yilwe ngesandla ithungiwe kusetyenziswa indlela yesiko. zahlulwe zadityaniswa ngamanqaku amathathu ngeenkcukacha ngasemva, enye i-elastics ijikeleze isihlahla, ubungqingqwa obulungekileyo, obulungele ukusetyenziswa kwemozulu yemihla ngemihla kunye nokubanda. ● Inqaku akukho: MG-005 ● Ubude boboya bumalunga ne-6-10mm .. ● Umbala: mnyama, inkamela kunye neminye imibala ● Ubungakanani obune, S / 8.5 M / 9 L / 9 ...
Iiklasi zodidi lwegusha ezenziwe ngezandla zakudala
Esi sikhuseli senzelwe amashishini ophawu. Umda wecuff wawugutyungelwe ngofele lweegusha, kwaye isikhumba esongezelelweyo sasenzelwe i-logo yebross. yasikwa ngokwamanqaku amathathu ngeenkcukacha zokuthungwa ngesandla ngasemva, indibaniselwano intle kakhulu. Yenziwe ngesikhumba semvu sendalo, sifudumele ngokumangalisayo kwaye somelele ngokugqwesileyo. yomelele kwaye ukanti iintsinga zendalo zenza iigloves ziphefumleke. Zifezekile kwimozulu ebandayo ehlahlayo ● Inqaku akukho: MG-003 ● Ubude boboya bumalunga ne-6-10mm. ● Umbala: mnyama, tan kunye neminye imibala ● ...
Iiglavu zodidi ezijongwe ngamehlo zakudala ezijingiswe ngamadoda
Iiglavu zamadoda, indlela yakudala. Sele idumile iminyaka emininzi, kwaye izakuqhubeka. Iveliswe ngofele lwegusha olunomtsalane nolutofotofo, uLusu lwegusha lwendalo lubuthathaka kwaye lukhanya, lufudumele ngokumangalisayo kwaye lomelele ngokugqwesileyo. yomelele kwaye ukanti iintsinga zendalo zenza iigloves ziphefumleke Le glavu iyilwe ngesandla ithungiwe kusetyenziswa ubuchule bendabuko. ilungele ukusetyenziswa kwemozulu yemihla ngemihla kunye nokubanda. ● Inqaku akukho: MG-002 ● Ubude boboya bumalunga ne-6-10mm .. ● Umbala: mnyama, inkamela kunye neminye imibala ● Ubungakanani obune, S / 8.5 M / 9 L / ...
Iiglavu zeegusha zodidi olwenziwe ngesandla zamadoda
Yenziwe ngofele lwegusha lwe-merino enomtsalane kwaye ibutofotofo, i-Natural leather yesikhumba ithambile kwaye ilula, ifudumele ngokumangalisayo kwaye yomelele ngokugqwesileyo. yomelele kwaye ukanti iintsinga zendalo zenza iigloves ziphefumleke Le glavu iyilwe ngesandla ithungiwe kusetyenziswa ubuchule bendabuko. zahlulwe ngokwamanqanaba ngamanqaku amathathu okubamba ngesandla ngasemva, zilungele ukusetyenziswa kwemozulu yemihla ngemihla kunye nokubanda. ● Inqaku akukho: MG-001 ● Ubude boboya bumalunga ne-6-10mm .. ● Umbala: mnyama, mdaka neminye imibala ● Ubungakanani obune, S / 8.5 M / 9 L / 9.5 XL / 10, Whic ...